Kanye West: Waxa laga ogyahay – iyo waxa aan laga ogeyn – xaaladda heesaagan caanka ah | Hangool News
Kanye West: Waxa laga ogyahay – iyo waxa aan laga ogeyn – xaaladda heesaagan caanka ah
Hangoolnews:- Arrimaha dhowr ah oo ku saabsan fannaanka caanka ku ah heesaha Rap-ka ah qaada ee u dhashay dalka Mareykanka, Kanye West, ayaa la garanayaa. Fannaanka heesihiisa waxay dhowaan noqdeen kuwa loogu gadashada badan yahay.
Guurgiisa gabadha barnaamijyada Reality Tv qabata ee Kim Kardashian waxay ka dhigtay mid ka mid ah dadka ugu caansan dunida.
Kanye West waa aabbe guul ka gaaray xayeysiinta dharka. Waxaa sidoo kale lagu karanayaa fikradihiisa adag ee uusan la gaban, qaarkoodna ayba muran dhaliyeen.
Xilli hore, wuxuu madaxweynihii hore ee Mareykanka George W Bush ku eedeeyay cunsurinimo xilli uu barnaamij TV oo toos ah uu ka qeybgalayay. Wuxuu sidoo kale sheegay in madaxweynaha hadda uu leeyahay “tamarta mas-duulaaga”. Dhowaan ayuu ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxweynaha, mana ahan markii ugu horreysay oo arrintaas shaaciyo.
Arrimahaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa Kanye West ka dhigaya shaqsi farta lagu fiiqo oo bulshada si weyn uga dhex muuqda.
Arrinta ugu muhiimsan ee aan waxba laga ogeyn waxay tahay waxa maskaxdiisa ka guuxaya.
Iyadoo aan waxbadan laga ogeyn, haddana waa in la xusuusto ololihiisa madaxtinimo ee dhowaan uu billaabay iyo farriimo Twitter oo isdaba joog ahaa.
Kulammada, iyo farriimaha baraha bulshada la soo dhigo ee ololahiisa ku saabsan waxaa ka dhashay hadalhayn aad u weyn.
Kanye West dabeecadihiisa waxaa lagu timaamay “kuwo jahwareer ah.” Haddaba maxay yihiin tallaabbooyinka uu qaaday fannaankan?
Xaaladdiisa wey adagtahay marka la eego xaqiiqooyinka ka sooo ifabaxaya, waxayna dhashay shaki la xiriira caafimaadkiisa dhanka maskaxda.
Qoraalka sawirka,West oo ka hadlayo ololahiisa doorashada madaxweynaha uu ku qabtay South Carolina
Mr Kanye wuxuu sannadkii hore sheegay inuu maskax ahaan yara xanuunsan yahay. Arbacadi shalay ahaydna, xaaskiisa Kim Kardashian, waxayarrintaas si rasmi ah ugu shaacisay barteeda Instagram.
“Sida aad intiinna badan ogtihiin, Kanye waxaa ku dhacay xanuun dhimirka ah, marka qofka cilladda noocaas ah qaba qofka la nool sida ay xaaladda ugu adkaan karto una xanuunjineyso waa la fahmi karaa,” ayey tiri.
“Waa nin maskax fiican haddana aan la fahmi karin, mararka qaar hadalladiisa iyo ereyada uu adeegsado ujeeddada uu ka leeyahay lama fahmayo”, ayey sii raacisay.
Fannaanka laga yaaban yahay ee u tartamaya xilka madaxweynaha Mareykanka
Fannaan saddex usbuuc ka fakarayay su’aal laga weydiiyay Trump
Heesaaga Kanye West oo tartaray markii wax laga weydiiyay Trump
Xaaladuhu wey kala duwan yihiin shaqsiyaadka astaamaha noocaas ah leh waxaa si aad ah isu bedbedela dabeecadahooda, gaar ahaan bukaannada la ildaran niyad jabka ee isku buuqsan maskax ahaan.
Ku dheg inta aad taqaano
Farriimo badan oo ka soo baxaya khubarada caafimaadka maskaxda ku takhasusay, waxay sheegayaan in ay jiraan arrimo caddeynaya ama astaamo muujinaya in qofka uu xaaladaha noocan ah uu la kulmi karo, si kasta oo uu caan u yahay.
Waxay sheegayaan in loo baahan yahay in la ballaadhiyo fahamka ay bulshada ka qabto caafimaadka maskaxda.
Waa in aad ka fekertaa dhammaan dadka kale ee dunida ku nool oo laga yaabo inay la halgamayaan xaalado adag oo aadna ka fikirtaa micnaha dhibkan uu leeyahay, si aragtida dadweynaha looga soo dhaweeyo,” ayuu yiri, Peter Kinderman, oo ah barafasoor ka howlgala Jaamacadda Liverpool.
Barafasoor Kinderman wuxuu sheegay in dabeecad aan qofka looga baran oo lagu arko aysan muhiim ahayn, balse ay fiican tahay in isbeddel kasta oo qofka ku yimaaddaba aan lala xiriirinin caafimaadka maskaxda.
“Xaqiiqooyinka ku tiirsanow, la soco waxa ay dadku sameynayaan, hana u maleynin xanuunnada maskaxda inay ka yimaaddaan dabeecadaha dadka oo keli ah,” ayuu yiri.
Noqo qof naxariis badan oo wanaagga dhiirageliya
“Wacyigelinta iyo ka wadahadlidda caafimaadka maskaxda in la ballaadhiyo waxay yeelaneysaa saameyn wanaagsan,” ayey tiri Dr. Carolyn Keenan oo ah la taliye dhinaca cilmu-nafisga.
Waxay sheegtay in xaaladda noocan ah ay u baahan tahay in la kala saaro magaca uu qofku leeyahay iyo xaaladda maskaxeed ee uu wajahayo.
Qoraalka sawirka,West oo madaxweyne Trump kula kulmay aqalka cad
“Waxaan u maleynayaa qof kasta oo ka tirsan bulshada ama shaqsiyaadka magaca leh, in looga baahan yahay inay xusuustaan in wax kastaba aysan xog ogaal u ahayn. Qof aadan xalladdiisa xog buuxa ka haynin, in aad fikir ka dhiibato way adag tahay, sababta oo ah waxaad ka fikir dhiibaneysaa wax aadan la socon.”
Shacabka waa inay jawaabta ay siinayaan noqotaa “mid cajiib ah oo ay naxariis ku dheehan tahay, waa haddii ay u baahdaan inay u jawaabaan Kanye West,” ayey tiri.